HomeTORKIAMorontsiraka mediteraney Tiorka33 MersinMESİAD: 'Tokony hatsangana ny rafitry ny lalamby hazavana fa tsy any Metro mankany Mersin'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, Morontsiraka mediteraney Tiorka, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Metro, TORKIA 0
mesiad mersine subway fa tsy rafi-pitaterana maivana
MESİAD Ny filoha Hasan Engin dia nanantitrantitra fa tsy manam-potoana ho very i Mersin mba hamahana ny olan'ny fitaterana, izay iray amin'ireo olana lehibe indrindra eto an-tanànanay, hoy i Hasan Engin tao anatin'ny fanambarana nataony fa ny rafitry ny lalamby hazavana no tokony hatao fa tsy ny metro nokasaina tany Mersin. Ny famindrana ny Metro dia ho lafo kokoa ny filoha Engin, et Mersin ny olana momba ny fitaterana miaraka amin'ny haingam-pandeha maivana, tokony ho vahana ao anatin'ny fotoana fohy sy ny vidiny mora vidy, ”hoy izy.
Ny filohan'ny Mersin indostrialy sy ny fikambanan'ny olona mpandraharaha (MESIAD) Hasan Engin dia nilaza fa tokony ho voavaha amin'ny fomba maika ny olana fitaterana ny tanàna metropolitanika toa an'i Mersin, raha tsy izany dia i Mersin no ho resy. Filoha Engin, ny olana fitaterana; Ny fandotoana ny rivotra, ny toekarena sy ny fizahan-tany no nahitana voka-dratsin'ny olana fitaterana izay lasa gangrenne ho an'i Mersin koa no nizara tamin'ny tolo-kevitry ny vahoaka. Namporisika ny manampahefana teo an-toerana sy ny andrim-panjakana rehetra ny filoha Engin handray andraikitra haingana.
"METRO MERSIN INDRINDRA TSY MAZAVA FAMPISEHOANA"
Ny filoha MESIAD Hasan Engin, izay nanao fanambarana ho an'ny Mersin Metro dia nanambara fa hanomboka amin'ny 2020 any Mersin ny asa amin'ny metro dia tsy mety amin'ny topografika Mersin ary ny toekarenan'ny tanàna sy ny tetibolan'ny Kaominin'i Metropolitan.
Filoha Engin; Yerine Misaotra ny rafi-pitaterana hazavana izay afaka mamarana haingana kokoa ary tsy misy vidiny firy ao amin'ny tanàna fizahan-tany Mersin, mpandeha dia mandalo amin'ny fijerena tendrombohitra sy ranomasina. Ny olana fitaterana dia tokony ho vahana miaraka amin'ny rafi-pitaterana maivana miandalana, amin'ny fotoana fohy, amin'ny vidiny mora. Ny kaominina Mersin Metropolitan dia afaka mamita io tetik'asa io amin'ny fananany manokana tsy mila vola ara-bola any ivelany. Tsy maika ny tetikasa Metro ”.
PRESIDENT ENGİN MAMPIASA NY TOKONY HANOTRA FAMPIASANA
Ny ben'ny tanàna Hasan Engin dia nilaza fa ny safidy diso dia mety ho very an'i Mersin amin'ny fampitahana ny rafi-pitaterana jiro eny an-dalambe sy ireo tanàna manodidina any Adana ary nanampy ny hoe: “Mila kaominina Mersin Metropolitan sy governemanta hafa eo an-toerana dia mila mamokatra vahaolana haingana sy maika. Ny fanapahan-kevitra radikaly dia tokony horaisina hanasoavana an'i Mersin, raha manao ny lalamby ianao tsy misy olona afaka mizaka izany. Ohatra, any Adana; noho ny làlana diso sy ny tiana dia tsy nahita ny faniriana tianao. Adana efa naharitra an-taonany maro i Adana. Rehefa mijery ny ohatra any amin'ireo faritany manodidina; Tian'ny olona ny lalamby maivana ho an'ny fitaterana ary koa ny tontolo iainana. Tsy asa fivezivezena amin'ny kilometatra any amin'ny tanàna an-dranomasina raha tsy mandehandeha ambanin'ny tany ary mijery ny ranomasina sy ny tendrombohitra. ”
"NY FARANY NY JEHOVAH AN-TANY dia TSY NITORONY"
Raha niresaka momba ny Fifanakalozana Hal-Hal, nanambara ny Filoha Engin fa ny Hal Junction, izay vita tanteraka dia tsy mandeha tsara noho ny fifamoivoizana miditra amin'ny seranana ary nampiasa ireto fanambarana manaraka ireto: “fitantanana Mersin Port; ny lalana miditra amin'ny fivoahana dia tokony hoentina haingana ao amin'ny faritaniny. Ireo lalan'ny mpandeha an-tongotra izay tsy mandalo ny mpandeha an-tongotra sy ny rindrina seranan-tsambo dia azo ovaina ho fanitarana làlana. Mikatso tsy tapaka ny fifamoivoizana mankany amin'ny seranan-tsambo. Tapitra ny halavam-potoana saingy tsy voavaha ny olana momba ny fifamoivoizana. Mbola mitohy ihany koa ny korontana toa izay. Raha tsy mampihatra an'io fomba io ny Mersin Port, tsy misy vahaolana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eo. Ny fiasa fanjakana miasa dia tsy mandeha ho toy ny fiasa noho ny fiampitana ao anaty vilia. ”
U TRANSPORTATION ARY FIVORIANA ENY AMIN'IZAY TOKOA INDRINDRA AZONAO VE NY FOMBA FOLO IZAO
Ny fanamafisana fa ny fitaovam-pitaterana miainga any amin'ny faritra onenana ho any amin'ny toeram-piasana sy ny indostria dia tokony hanamora ny filoham-pirenena, hoy ny filoha Engin, "Ny zava-dehibe tokony hambara dia ny fisian'ny indostrialy manana minitra 45 minitra farafahakeliny amin'ny fidirana atsinanana rehefa miditra ny tanàna avy amin'ny OIZ amin'ny ilany atsinanana. Tsy misy làlana hafa hafa ivelan'ny làlana izay, hoy izahay; 2. Ny fampiharana zoning 18 dia tokony hosokafana haingana araka izay azo atao manomboka eo amin'ny làlan'ny indostrian'ny làlana mankany amin'ny zaridaina nokarakaraina Tarsus. Noho ny fahavitan'ity lalana ity dia hisy fidirana hafa mankany Deliçay izay lalana tokana mankany Mersin avy any atsinanana. Hihena ny hamafitoana eto. Mandritra izany fotoana izany, zava-dehibe tokoa ny famolavolana ny rafi-pitaterana maivana mankany amin'ireo zotra indostrialy amin'ity lalana ity izay hitarina, raha ny resaka fifamoivoizana an-tanàn-dehibe ”.
Tokony hanaovana ny planeta metatra fa tsy ny Gaziantepe tram 29 / 01 / 2014 Tokony atao amin'ny toeran'ny fiarandalamby i Gaziantepe fa tsy ny metro: Gazetin'ny Architects Gaziantep no nisarika ny saina ho amin'ny olan'ny tanàna alohan'ny fifidianana teo an-toerana. Severoglu, 'Fanambarana momba ny fifidianana eo an-toerana' miaraka amin'ny tatitra manomana ny anaran'ireo governemanta ao an-toerana mba ho filohan'ireo olana madinidinika ao an-tanàna sy ireo vahaolana naroso omena azy. Sıtkı Severoğlu, izay nandamina ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Chamber of Architects, dia nanambara ny fanambarana nomanin'izy ireo talohan'ny fifidianana teo an-toerana. Manamarika fa ny fifamoivoizana no olana lehibe indrindra ao an-tanàna, hoy i Severoğlu, yerel Local cak
Ny rafi-pitaterana lamasinina ho an'i Manisa dia tokony hatao 12 / 07 / 2012 Mamaly ny fanontaniana raha afaka mitondra anjara biriky amin'ny fiara fitaterana an-dàlambe ny OIZ, hoy i Türek: "Mazava ho azy, tetikasa tsara ity. Ny lalam-barotra, foibe ara-kolontsaina, toy ny olana mila ilaina eo amin'ny fandaharan'asan'ny ben'ny tanàna. Manaja azy isika. Mandritra izany fotoana izany, misy fizarana amin'ny fitateram-bahoaka izay misy ihany koa amin'ny fandaharam-potoana izay manosika antsika akaiky. Manantena aho fa i Cengiz Bey dia afaka mialoha an'io aho; Azontsika atao ve ny manatsara ny rafi-dalan'ny lamasinina mba hanafoanana ny fifamoivoizana amin'ny fiara fitateram-basy eo anelanelan'ny Manisa sy ny indostrian'ny indostrialy, dia hiresaka momba azy ireo isika. " Ny rafi-dalampanorenana maivana dia tsy azo ihodivirana ny làlam-pitaratra marina eo amin'i Manisa sy ny OSB.
Sakarya Metropolitan Light Center an'ny Tranom-bakoka Center Railway - Yenikent eo anelanelan'ny 2. Fandefasana làlam-pifandraisan-davitra 25 / 07 / 2012 Tanànan'ny tanànan'i Sakarya, "Centre Bazaar - Yenikent eo anelanelan'ny 2. Stage Light Rail System Project vaovao. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; ny tetikasa mialoha sy ny fandaharam-potoana azo atao. Ireo manampahefana notantarainay tamin'ity lohahevitra ity dia nilaza fa hanohy ny andro 480 ny asa ary ny tetikasa dia ho tafiditra ao amin'ny programa fampiasam-bola 2013 aorian'ny famitana ny asa ary ny fanambarana an-tsoratra dia hatao. Azafady tsindrio raha mila vaovao bebe kokoa: Source: Investments
Sakarya Metropolitan Light Center an'ny Tranom-bakoka Center Railway - Yenikent eo anelanelan'ny 2. Fandefasana làlam-pifandraisan-davitra 30 / 07 / 2012 Tanànan'ny tanànan'i Sakarya, "Centre Bazaar - Yenikent eo anelanelan'ny 2. Stage Light Rail System Project vaovao. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; ny tetikasa mialoha sy ny fandaharam-potoana azo atao. Ireo manampahefana notantarainay tamin'ity lohahevitra ity dia nilaza fa hanohy ny andro 480 ny asa ary ny tetikasa dia ho tafiditra ao amin'ny programa fampiasam-bola 2013 aorian'ny famitana ny asa ary ny fanambarana an-tsoratra dia hatao. Araka ny fantatra dia nahazo ny fifanarahana ho an'ny serivisy mpanolotsaina Danışmanlık ny orinasam-pampandrosoana 04 Mescioğlu mba hanomanana ireo tetikasa voaomanan-dàlana sy ny fandaharam-potoana mialoha ny fandaharam-pianarana mikasika ny drafitrasa lehibe momba ny fitaterana sy ny laharam-pahamehan'ny fitateram-bahoaka.
Sakarya Light Rail System System Tetikasa eo anelanelan'ny Çarşı Center sy Yenikent 2. fandaharam-potoana mialoha sy fandalinana mialoha ny fahazoana lamasinina 28 / 03 / 2013 Tanànan'ny tanànan'i Sakarya, Centre Bazaar - Yenikent eo anelanelan'ny 2. Ny fivoarana vaovao dia voarakitra momba ny tetikasa Etap Sakarya Light Rail System System. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; Ny fandalinana mialoha ny fandaharam-potoana sy ny fandaharam-pianarana aloha dia mitohy. Milaza ny manampahefana fa aorian'ny famitana ireo asa ireo, dia azo raisina amin'ny tapany faharoa amin'ny 2013 ny lisitry ny fanorenana. Araka ny fantatra dia ny Istanbul Ulasim AS no nanatontosana ny fandalinana ny lalana 20 kilometatra eo ho eo. dia nomanin'ny orinasa natolotra tao amin'ny tanàna. Ny rafitra napetraka amin'ny làlana dia hofaritana araka ny drafitry ny Master Master Plans Sakarya. Azafady tsindrio raha mila vaovao bebe kokoa: Source: Investments
Tokony hanaovana ny planeta metatra fa tsy ny Gaziantepe tram
Ny rafi-pitaterana lamasinina ho an'i Manisa dia tokony hatao
Ny Metrobus dia tonga any Şanlıurfa fa tsy ny Rail Rail System
Ny làlam-pitaterana lamasinina nosoloina fa tsy Trambus
Tokony hanangana bozta ny sambo sy ny lalamby
Tokony hanangana an'i Malatya eo anelanelan'ny Elazığ Rail System